Mpilalao baolina kitra afrikana Tantaran'ny fahazazana sy tranga tsy fantatra momba ny Biography Untold
Home TORO FARANY AFRICAN
Ny baolina kitra afrikanina tsirairay dia nahazo ny tantaran'ny fahazazana izay feno fotoana tsy hay hadinoina izay mahafinaritra sy mampihetsi-po. Ny iraka ataonay dia ny milaza aminao amin'ireny fivarotana voalohany momba ny fiainana sy ny Afrikana mpilalao baolina kitra afrikanina ity.
Fa maninona no mifantoka amin'ireo tantara afrikanina mpilalao baolina kitra apetraky ny Biography?
Amin'ny fahatsoram-po rehetra, ataontsika izany ho fomba hamahana olana iray malaza izay misy momba ny Football Football. Tato ho ato, nahatsikaritra ny elanelam-pahalalana amin'ny tranonkala eran'izao tontolo izao isika, izay mifandraika amin'ny tsy fisian'ny fampahalalana nalamina momba ny Footballers Afrikanina amin'ny resaka tantaran'izy ireo voalohany.
Ao anatin'ny fikasana hanakatonana io elanelam-potoana io dia nanapa-kevitra ny hanangana iraka i LifeBogger tamin'ny taona 2016 hanolorany tsy tapaka ny tantara momba ny fahazazan-jaza sy ny tantara momba ny baolina kitra afrikana.
Ny votoaty baolina kitra afrikanina:
Ny lahatsoratra rehetra momba ny mpilalao baolina kitra avy amin'ny kaontinanta dia voaomana hampiseho lozika lojika. Ny votoatinay afrikana dia milaza aminao izao manaraka izao.
Voalohany sy voalohany, mitantara ny fahazazana ireo mpilalao baolina kitra Afrikanina isika, manomboka amin'ny fotoana nahaterahany ary avy eo, ny traikefa eo amin'ny fiainana voalohany.
Izahay dia mitondra anao ny mombamomba ny fiavian'ny fianakaviana sy ny niandohan'ireo mpilalao baolina kitra afrikanina. Anisan'izany koa ny fampahalalana momba ny ray aman-dreniny (reny sy dada).
Lazainay aminao ny hetsika voalohan'ny Fiainana izay nahatonga ny nahaterahan'ireo mpihetsiketsika baolina kitra Afrikanina.
Ankoatr'izay, milaza aminao ny zava-niainan'ny Footballers Afrikanina nandritra ny fikarakarana tany am-boalohany izy ireo.
Ny Lalantsika mankany amin'ny Fame Story dia mitondra anao ny 'Turning Point' eo amin'ny sehatry ny tanora mpilalao baolina kitra Afrikanina.
Ny The Rise to Fame Story dia manazava ny fahombiazan'ny mpilalao baolina kitra afrikanina.
Mandeha lavitra izahay raha hanavao anao ny fiainana mifandraika amin'ny baolina kitra afrikanina. Raha atao amin'ny teny hafa, ny fampahalalana momba ny sakaizan'izy ireo sy ny vadiny.
Manaraka izany ny zava-misy momba ny fiainana manokana an'ny mpilalao baolina kitra afrikanina.
Izahay koa dia mahafantatra anao ireo olona ao amin'ny fianakavian'ireo Footballers Afrikanina ary koa ny fifandraisan'izy ireo tsirairay avy.
Ny ekipanay dia mampahafantatra ny vola miditra amin'ny baolina kitra afrikanina, ny tombany ary ny fomba fiaina.
Farany fa tsy ny lisitra, entinay aminao Untold Facts izay tsy mbola fantatrao fa nisy ny momba ny Football Football Afrikanina.
Hatreto aloha dia nanapaka ny sokajy Afrikana ho amin'ireto sokajy ireto ireto. Anisan'izany;
Rehefa avy mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia ho hitanao fa mino ny LifeBogger amin'ny hevitra ny mandray anjara amin'ny fahalalana amin'ny fomba mahazatra amin'ny fandefasana azy Tantara momba ny fahazazana ary Zava-misy Biography an'ny baolina kitra afrikanina. Ho antsika dia tsy ny fijerena Football fotsiny fa ny fahafantarana ireo tantara ao ambadiky ny anarana hita eny an-kianja.
Na eo am-piezahantsika ny fahamarinana sy ny hitsiny isika, tsara fanahy Mifandraisa aminay raha mahita olana ianao, misy hadisoana na tsy fetezana ao amin'ny lahatsoratra momba ny Football Football Afrikanina.
Ary farany, atolotray anao ny tantaran'ny fahazazana sy ny tantaram-piainan'ny mpilalao baolina kitra afrikanina.
Kalidou Koulibaly fahazazana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 24 Janoary 2019 1
123...5Page 1 ny 5